भाेली दिदिले भाइलाइ राखी बान्ने दीन - जानाै दिदिकाे बारेमा मिठा मिठा भनाइहरू - ज्ञानविज्ञान
साउन महिना लाग्ने बित्तिकै सबैलाइ एउटै कुराकाे चासाे हुने गर्दछ कि रक्षाबन्धन कहिले छ । याे दिन एक दिदिले अाफ्नाे भाइलाइ राखी बान्ने गर्छन । भनिन्छ याे दिन दिदिले अाफ्नाे भाइलाइ राखी भानेर भाइटिकाकाे लागी बाेलाउने गर्छिन । हामीले यहाँ अाज यहि रक्षाबन्धनलाइ महत्व दिदै दिदिकाे लागी बनेकाे एक भिडियाे SAKARATMAK SOCH युट्युब च्यानलबाट साभार गरेका छाै ।
भिडियाे हेर्नुहाेस :
रक्षा बन्धन एवम् जनै पूर्णिमा किन मनाइन्छ
प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मनाइने ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन एवम् जनै पूर्णिमा आज मनाइँदैछ ।
Don't Miss it यि ६ खानेकुरा पुनः तताएर खाँदा क्यान्सरको खतरा हुन्छ, जान्नुहाेस्
Up Next सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ रिँगटा
किन झमझमाउँछ हातखुट्टा ? यस्तो भए के गर्ने ?
किन झमझमाउँछ हातखुट्टा ? यस्तो भए के गर्ने ? जान्नुस धेरैको साझा समस्या र जिज्ञासा हो हातखुट्टा झमझम गर्नु ।…
हामीले तामाको भाडोमा राखेको पानी प्रयोग गरेमा कतिपय रोग नलाग्ने भन्ने कुरा सन्दै आएका छौं । तर, कतिपय चिजहरु तामाको…